Indodakazi (14) nonina esokeni elilodwa
BONGIWE ZUMA | December 18, 2019
UNINA wendodakazi (14) “ebithandana” nesoka elilodwa naye, ugcine evumelene nesoka labo ukuthi liqhubeke noyedwa wabo.
Lo wesifazane wakhuluma naleli phephandaba ngoSepthemba ewotha ubomvu emva kokubamba oqotsheni isoka lakhe (35) elinguyise wendodana yabo enonyaka, lilele nendodakazi yakhe.
Kumanje isoka lingaphandle ngesigwebo seminyaka emihlanu elengisiwe, laboshwa ngoSepthemba ngecala lokudlwengula ngenxa yeminyaka yengane.
Unina wengane wavula icala emva kokuphaphama entathakusa ngo-3 wabona indodakazi yakhe ingekho endlini.
Wakhanyisa wavusa udadewabo bayibheka umuzi wonke. Elandisa leli phephandaba waveza ukuthi wethuka woma ebona izimpahla zasekhishini zikhishelwe phandle.
Uma bevula ngaphakathi bafica isoka lindlale phansi, lilele nendodakazi yakhe. Ebabuza bamtshela ukuthi bayathandana, okuyinto abama ngayo nasenkantolo selimangalelwe isoka.
“Kakusenankinga. Myekeni manje sekulungile. Sahlala phansi sakhuluma. Sesiyilungisile inkinga,” kusho unina wentombazane.
Uma ebuzwa ngezinhlelo zokuvikela indodakazi yakhe nokuqinisekisa ukuthi ngeke kusenzeka okufanayo, ungene ezintangeni.
“Ngeke esaqhubeka naye, uzoqhubeka nami kuphela. Kazikho izinhlelo enginazo ngoba sesiyilungisile inkinga,” kusho unina wentombazane.
U-Adeshnne Naicker, oyimenenja yenhlangano ebhekele amalungelo ezingane KwaZulu-Natal iChildline, uthe kumele kuqinisekiswe ukuphepha kwentombazane.
“Ngokomthetho kakufanele ukuthi ingane ngabe isasondelene nabo. Kufanele ingane isuswe kubo itholelwe ikhaya eliphephile ngoba ekhaya ehlala kulo kayisalifanele. Sizongenelela sithole ukuthi kwenzekani ngalolu daba,” kusho u-Adeshnne.
Ummeli u-Adv Mfanafuthi Biyela, uthe kuyicala ukubonakala komlisa eduze komgilwa.
UBiyela uthe namalungu omphakathi kuwumsebenzi wawo ukuvula amehlo abike ngemikhuba eyenzeka emphakathini, ukuze kuvikeleke izingane.
“Osonhlalakahle kusuke kufanele bangenele odabeni oluthinta ingane. Umgilwa uma eyingane usuke engakakwazi ukuzithathela izinqumo ezifanele. Kuyiphutha kumzali ukusondelana nomuntu osuke esolwa ngokugila ingane yakhe.
“Noma ngabe icala selike laya enkantolo, waphuma umsolwa ngezizathu ezithile. Kodwa kakusho ukuthi kakusafanele kuphinde kubikwe uma kukhona okungalungile abantu abakubonayo. Namalungu omphakathi angabikela amaphoyisa,” kusho uBiyela.
Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi eKZN, uMnuz Mhlaba Memela uthe: “Indawo okuhlala kuyo ingane kumele kube ngephephile. Kakufanele ngabe kunomuntu owenze isigameko esifuze lesi, osakwazi ukusondelana nomgilwa.
Sizoqoqa yonke imininingwane ngalolu daba, silulandele nosonhlalakahle,” kusho uMemela.